Af-soomaaliga oo ku soo biiray luuqadaha Google turjumi karo. | Somaliska
Shirkada Google oo adeegyo badan oo dhinaca cilmiga farsamda internet-ka ah caalamka ku soo kordhisay ayaa luuqada soomaaliga ku soo dartay luuqadaha website-kooda turjuman karo.
Talaabadani waxay afka Soomaaliga ka mid dhigaysaa luqadaha tiradoodu 70-ka kor u dhaaftay ee ku jira qaybta Google Translate waxaana arintaasi dadka af Soomaaliga ku hadla u fududayn kartaa in ay turjuntaan erayada aysan ku aqoon afafka kale.
In kasta oo adeegani cusubyahay ayna tahay arintaasi tilaabo wanaagsa oo dhanka hor marka loo qaaday hadana adeegaas wuxuu u baahanyahay in la hor mariyo oo hada waxaa ka muuqda in uusan si wanaagsan oo la wada fahmi karo uusan mararka qaar waxaad galisay kuugu turjumayn.
Shirkada google yaa horay Soomaalida oga codsatay in ka kaalmeeyaan samaynta mashuraacaan oo ka mid ahaa adeegyo ay balan qaaday in ay soo kordhinayso.
asc wa wax lagu farxo ayaan leyahaya waxaa faaido aye no tahay qasatan artayda melkasto ey jogaan mahadsanid google ayaan leyahay iyo waliba somalida kalashaqeysay arinkaan iyo wabsedka somaliska
waaw waa wax aad loogo farxo markii ugu hureeyday oo lahelo adeeg somalida anfacayo
ASC WAA ARRIN AAD LOOGU FARXO OO DHIIRIGILIN LEH, AAD BAAD U MAHADSAN TAHAY JIMCAALE.
Muna (Arintii Labada sano) says:
waxaan Maanta ogaysiinayaa dhamaan dadka labada sano in ay soo dhamaatay Maxaa yeelay afar qoys oo ah qolada labada sano lagu haystay ayaa ogolaanshiyo helay, waliba waa doraad iyo shalay marka ay usoo dheceen ogaalanshuhu, waliba waxaa xusud mudan in gabadh kamida gabdhaha ninkeedu ka maqanyihiin ee la ogolaaday ay hal wiil oo qudha haysato oo ay Sweden ku dheshay, markaa waa la furay culayska ilaahayna khayr wayn haka dhigo.
waa arin lagu farxo muna aqbaartaada waadna kumahad santahay aqbaarta aad nasoo gaarsiisay waxaa ku su aalay dadkaas madiidmo horey ayeey haaysteen oo lasiiyay mase waa dad hada xareeystay oo la siiyay ogolaansho ?
waa arin lagu farxo arintaan eey sameysay google waxeeyna noo tahay faa iido weeyn hadaanu nahay soomaali elle ayaana mahad leh
Cabdi casiis walaal diidmo hore way haysteen qaarbaa waliba afarta qoys ee aan sheegay laba ka mida waxay haystaan diidmooyin ilaa dhawra, Markaa intaan Goaan lasoo saarinba ayay bilaabeen in ay ogolaanhiyo bixiyaaan waana wax ilaahay loogu mahad naqo dadka la ogolaaday waxay ku noolyihiin Linkoping.
ASC WAN IDIN ALAMAY DHAMAN UMADA SOOMAALIYEED. WA ARIN AAD LOOGIU FARXAY LKN HADU NOQDO SIDA LEXKONKA CML WAXBA MA FAA.IIDEYNAAYO WAAYO LEXIKONKA WAXA AAD RABTO KAMA HELEYSID XATA MA FAHMEYSID EREYADA AFKA SOMAALIGA LAGU TURJUMAY WAAYO SIDA LOO SOO DIYAARIYA AYA WAX KA QALDANAYEN . MA AHAN SIDI LOO BAHNA MANA DHAMEESTIRNA LKN WAAN SO DHAWEYNEYNA ARINKA IN LUUQADEENA AYKA SO DHEX MUUQATO GOOLE
asc somaliyed Karlshamn yaa yaqaana Somali dagan tel ka haya qofkii haya ha i siiyo magaladas xidhiidh dad somali ah oo dagan aad ban ugu bahanhaye
waan grty muna aadbaad umahad santahay sida wanaagsan oo usoo gudbisay aqbaarta koleey ma arag ani ahaanteey qof lasiiiyay ogolaansho oo 2 sano ahaa